FIX FIX WINDOWS 10 FILE ASSOCIATIONS AMIN'NY FICHIER FIKAMBANAM-PIFANDRAISANA - WINDOWS - 2019
Fix Fix Windows 10 File Associations amin'ny Fichier Fikambanam-pifandraisana
Ny fifandraisana tsy dia mazava loatra eo amin'ny Windows 10 dia mety ho olana, indrindra raha mikasika ny karazan-drakitra toy ny .exe, .lnk sy ny toy izany. Ny fahadisoana amin'ny fikambanan'ireny rakitra ireny dia mety hitarika, ohatra, satria tsy misy famandrihana sy fandaharana atao (na manokatra amin'ny programa sasany tsy misy ifandraisany amin'ilay asa), ary tsy mora foana ho an'ny mpampiasa vaovao ny manamboatra azy io (Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fikarakarana ny tanana: File Associations Windows 10 - inona no izy ary ahoana no fomba hamahana izany).
Ao anatin'ity famintinana fohy momba ny fandefasan'ny File Association Fixer Tool ity, dia ahafahanao mahatsapa fifandraisana amin'ireo karazan-drakitra sasany manan-danja amin'ny Windows 10 automatique. Ilaina ihany koa: Windows Error Correction Software.
Ampiasao ny Fitaovan'ny Firaketana Fikambanam-pirafetana mba hamerenana ny fikambanan'ny fichier
Ity rindranasa ity dia mamela anao hamerina amin'ny laoniny ny fikambanan'ny sokajy manaraka: BAT, CAB, CMD, COM, EXE, IMG, INF, INI, ISO, LNK, MSC, MSI, MSP, MSU, REG, SCR, THEME, TXT, VBS, VHD, ZIP ary koa manitsy ny fisokafana sy ny lisitra amin'ny mpikaroka (raha toa ny olana dia vokatry ny fikambanana mpanao kolikoly).
Raha mikasika ny fampiasana ny File Association Fixer Tool, na dia eo aza ny tsy fisian'ny fiteny interface Rosiana, dia tsy misy fahasarotana.
Raiso ny programa (raha tampotampoka ianao dia tsy mihazakazaka ny rakitra EXE - ny vahaolana fanampiny). Noho ny fanaraha-maso ny kaonty user, dia manamarina ny fanombohana.
Tsindrio ny karazan-drakitra misy fikambanana tianao haleha.
Hahazo hafatra izay efa napetraka ilay olana (ny rakitra marina amin'ny fikambanana dia hiditra ao amin'ny rejisitra Windows 10).
Raha toa ka mila manamboatra ny rakitra fichier exe. (Ary ny programa dia koa ny .desk.efile), dia manova tsotra izao ny extension of the File Association Fixer dossier executable from .exe to .com (jereo ny fomba fanovana ny fanitarana ny rakitra ao amin'ny Windows).
Raiso ny Fichier Fikambanan'ny Fixer maimaimpoana maimaim-poana amin'ny tranonkala http://www.majorgeeks.com/files/details/file_association_fix_tool.html (tandremo, ny rindrambaiko dia vita amin'ny rohy voamarika ao amin'ny pikantsary etsy ambany).
Ny programa dia tsy mitaky ny fametrahana ny ordinatera - manaisotra fotsiny ny arivoarivo ary manamboatra ny fitaovana hanatanterahana ny fanamboarana.
Raha ny zava-misy dia ampahatsiahiviko anao aho: jereo ireo fampidiran-drakitra ireo amin'ny virustotal.com alohan'ny hanombohana azy. Amin'izao fotoana izao dia madio tanteraka izy, saingy tsy mijanona ela loatra.